Aamina ma noqon doontaa haweenaydii u horraysay ee hogaanka u qabata Ururka Ganacsiga Adduunka? - Jigjiga Online
HomeSomalidaAamina ma noqon doontaa haweenaydii u horraysay ee hogaanka u qabata Ururka Ganacsiga Adduunka?
Nairobi (JO) – Todobaaddo uun ka dib markii agaasimaha guud ee ururka ganacsiga adduunka ee WTO, Roberto Azevedo, sida lama filaanka ah u shaaciyey is casilaaddiisa, ayaa waxa soo baxay in diblomaasiyadda reer Kenya ee wasiirkana ah, Aamina Maxamed ay ka mid tahay musharaxiinta ugu cadcad kuwa u tartamaya in ay bedelaan.
“Maadaama oo Kenya tahay dal si dhab ah u rumaysan xoojinta ururada caalamiga ah, waxaan aaminsannahay in ay jirto baahi degdeg ah oo loo qabo in boodhka laga tumo ururka WTO si uu dhamaan qaramada oo dhan baahiyahooda uga shaqeeyo, ha yaraadeen ama ha weynaadeene. Waxaanu sidoo kale rumaysannahay in haatan ay tahay goortii ay Afriki qaadan lahayd masuuliyadda ay mudantahay ee ah in ay hogaanka u qabato WTO” ayaa lagu yidhi warbixin ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Kenya.